I-chalet eqhelekileyo kubathandi bendalo - I-Airbnb
I-chalet eqhelekileyo kubathandi bendalo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAlexandra
I-Savoyard chalet enencasa yokuhombisa kwi-hamlet esuswe kubemi abambalwa. UZOLE UQINISEKILE! Ukuhamba ngeendlela ezahlukeneyo kufutshane. Ifakwe imizuzu engama-30 ukusuka e-Annecy, imizuzu engama-45 ukusuka eGeneva kunye ne-Aravis ski slopes (La Clusaz le Grand-Bornand).
Ukuphumla OKUNGAKUMBI .....I-JACUZZI ziindawo ezi-5, ezilungele ubusuku be-SNOWY phantsi kweenkwenkwezi njengesibini okanye njengosapho.
I-chalet esandula kulungiswa ngokuhlobisa okuqhelekileyo kunye nokucocekileyo. Ukuxhotyiswe ngokupheleleyo, unokuba neengokuhlwa ezintle ze-fondue okanye iraclette emlilweni ... kwaye ujabulele ubusuku obuneenkwenkwezi emanzini kwi-38 ° ...
Ifakwe kwi-hamlet yabemi abambalwa kumphakamo we-1100 yeemitha, unokonwabela uxolo kunye nemibono emihle. Ilali ibekwe kakuhle kuba isembindini wesebe ikuvumela ukuba ufikelele ngokulula kwiidolophu eziphambili, iilali kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide zaseHaute-Savoie.
Siya kuhlala sifumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thorens-Glières